Indlela ukuphendula umbuzo "wena unjani?" - imithetho elula imibuzo kanye nezimpendulo
Self-kulinywe, Oratoskoe art
Amandla baqonde futhi kumnandi lokuveza imibono yabo kwakubaluleke njengoba ezinsukwini kaPlato no Cicero, kanye empilweni yesimanje. Isidingo njalo okuxhumana kubangela abantu ukufunda izisekelo ubugagu. Ikhono bokukhuluma - kuyingxenye ebalulekile impumelelo ezindaweni ezahlukene umsebenzi.
amasu Virtuoso zisebenzisa amazwi ukukusiza ukuba bathole izimpendulo zemibuzo, okungase kuthinte zakho nge-career, ibhizinisi, noma, ngombono wakho, akayena ngempela kwaze kwaba seqophelweni hhayi isihloko.
Mhlawumbe njalo agumenti ukuphendula imibuzo jikelele noma ikhono lokungacasuli. Okubalulekile akukhona ngokwayo umbuzo, futhi indlela osabela ngayo-ke.
Ngokwesibonelo, indlela ukuphendula umbuzo "wena unjani?". Kuyadingeka ukuba silondoloze ezolile futhi impendulo ukuze singathwesi ahlinzeke imininingwane ethile, kodwa musa kabi umuntu ebuzwa.
Yini odinga ukuyazi?
Umthetho wokuqala uwukuthi: uma ungathandi umbuzo, ukuhambisa ingxoxo komunye kuncike, ingaphazanyiswa. Futhi okhuluma kwalowo kuyoba mnandi kuwe. Ukwehluka - abantu abaseduze ngubani esiqotho ibhizinisi lakho, kubalulekile ngabo ukuphendula okuqukethwe. Ngakho zama ukuthola amagama afanele, ukuze kuhlangatshezwane nesidingo yomuntu.
Okwesibili - cela esiphikisayo imibuzo. Ngezinye izikhathi nosicelayo ufuna ngempela ukukhuluma ngawe, kodwa angazi ukuthi ungayiqala kanjani ingxoxo. Vele liqondise kabusha umbuzo futhi ngilalelisise, bangaki sibe nokubekezela.
Okwesithathu - Ukulisebenzisa ngokuphindaphindiwe, okwenezela ekuqaleni umusho: "Ngiqonde kahle (waqaphela) ukuthi into ebaluleke kakhulu okufanele uyenze manje - lena impilo yami?" Noma "Kanti ngingumJuda yini mina ukulungisa ukuqonda ukuthi izinkinga zabanye abantu ngawe kubaluleke ngaphezu kwakhe?". Ukusabela ngale ndlela ngeke ibakhathaze interlocutor.
Okwesine - uphendule amahlaya. Lokhu kuzosiza ukucisha interlocutor futhi uzokusindisa kusukela ukusabela nolaka kuwe lokho abakuzwile. Indlela aphendule? Ephendula umbuzo othi "kanjani wena" Ungenza ihlaya: "Ingabe ngempela ufuna ukukhuluma ngakho? Ngokuphawulekayo, une amahora amabili noma amathathu, Ngikutshela ngokuningiliziwe mayelana konke? ".
Okwesihlanu - Hlala kwathela. Qala ekuphenduleni bekude, usebenzisa amagama abstruse. Awazi kanjani ukuphendula umbuzo "wena unjani?" Kumhlobo wakhe babema babuze ngokuzayo? Ucoca ngemininingwane mayelana nomcimbi isidina cishe konke ukuphila kwakhe. imigomo Ithanda usithe kakhudlwana futhi ezingacacile nokuchazwa kwayo. Akunakwenzeka ukuthi le nkinga ngeke engozini ukuba ubuze.
Okwesithupha - isikhathi umlingisi. Play i sezombusazwe ezibalulekile esithangamini nabezindaba. Nansi enye inguqulo ye ukuphendula kanjani umbuzo othi "wena unjani?". Ngokuqiniseka ukuthi: "Umbuzo olandelayo, sicela." Futhi umthombo ziyophoqeleka ukuya okushiwo ingxoxo, noma izoziphelela, uma kuhlangana kwaba ngephutha.
I oyisisekelo - inhlonipho. Uma imibuzo, ungenaso indoda ngabandayo. Futhi ucasukile - akuyona izaba ukuba luhlaza ukuze ikheli funa. Ziphatheni isibindi ngesikhathi sonke, ekhululekile, futhi okubaluleke - ngenhlonipho.
Lemibuzo nezimpendulo - esibaluleke kakhulu zokuxhumana womuntu. amakhono ubugagu ukuze kulekelelwe ingxoxo eyakhayo futhi nobudlelwane obuhle nabantu. Lokhu kubaluleke kakhulu ekuphileni kwansuku zonke.
Wenzenjani ukuthuthukisa esifubeni izwi?
Kanjani ukuze ufunde ukuthi "akekho"
Indlela yokuthuthukisa silulumagama, futhi hlobo luni umsebenzi kwakudingeka lokhu?
She - kuyinto wayeyisazi amazwi
Uba kanjani ezithakazelisayo ukuze umphakathi?
Popular ukuzivocavoca Kirov
Sihalalisela laba abashadayo ngosuku lwabo lomshado - lena onesizotha futhi enesibopho
Artificial inhliziyo massage and umuntu afakwe emishinini yokuphefumula: kokuqhuba inqubo, imithetho kanye ukungaguquguquki
Amagilebhisi Libya - a izinhlobo yesimanje zakuqala-ukukhula
Magic Ukudla neminye esiswini ezinhlangothini, noma imfihlo sibalo amahle
Indlela ukukhetha PVC izikebhe kagesi, futhi iziphi it has?
Leash Diverter ngoba perch: ukufakwa, izindlela imishini ukudoba
Pachypodium: ukunakekelwa ekhaya, incazelo, zinhlobo
Negesi imishini kwi "iNsephe": izici ukufakwa, ukulungisa kanye nokubuyekeza
Amahora woqobo: Wall futhi Lasesihlakaleni
Ibanga izingxenye. engela Zezıhlabane iphuma ukungalingani: Kala